Gary Neville oo si cad u sheegay in Man United aysan ku guuleysan doonin Premier League inta ay joogaan labadan xiddig…!! – Gool FM
Gary Neville oo si cad u sheegay in Man United aysan ku guuleysan doonin Premier League inta ay joogaan labadan xiddig…!!
Dajiye September 20, 2020
(Manchester) 20 Sebt 2020.Halyeeyga reer England ee Gary Neville ayaa sheegay in Manchester United aysan awoodin inay ku guuleysato horyaalka Premier League, inta ay daafaceeda dhexe ay joogaan Victor Lindelof iyo Harry Maguire.
Crystal Palace ayaa xalay guuldarro ku baday Manchester United garoonkeeda Old Trafford, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League.
Gary Neville oo haatan ka howlgala shabakada “Sky Sports” ayaa inta uu ku gudi jiray falanqeybta kulankii xalay dhex maray kooxaha Man United iyo Crystal Palace, wuxuu yiri:
“Man United ma awoodi doonto inay ku guuleysato horyaalka haddii aysan la soo saxiixan daafac dhexe oo ordi kara isla markaana difaaci kara”.
“Kooxda ma awoodi doonto inay ku guuleysato horyaalka Premier League iyadoo ay joogaan labada daafac dhexe ee haatan, waa inay la soo saxiixata daafac dhexe ee xoogan oo wehliya Lindelof iyo Maguire”.
Si kastaba ha noqotee, Manchester United ayaa kula ciyaari doonto kooxda Luton Town tartanka Carabao Cup Talaadada soo socota, ka hor inta aysan ku laaban horyaalka Premier League Sabtida soo socota, iyadoo la ciyaari doonta naadiag Brighton.
Manchester City oo dalab weyn ka gudbisay xiddig ka tirsan kooxda Atlético Madrid
Antonio Rudiger oo ka maqan shaxda kooxda Chelsea ee ka hortagaya Liverpool, xilli mustaqbalkiisa uu shaki ku jiro